Salon de l’étudiant 2018: manohana ny mpianatra ny Telma | NewsMada
Salon de l’étudiant 2018: manohana ny mpianatra ny Telma
Par Taratra sur 25/10/2018
Mpanohana ofisialy ny hetsika ho an’ny mpianatra, Salon de l’étudiant, atao eny Ankatso, ny 24 hatramin’ny 26 oktobra izao ny orinasa Telma. Tsy mitsahatra mitsinjo ny hoavin’ny mpianatra sy ny tanora malagasy amin’ny ankapobeny ny Telma, manomboka any amin’ny fianarany, ny fiofanana arakasa, mba hananany asa sahaza ny fianarana rantoviny ka hivoarany amin’ny fiainany.
Mandray mpiasa vaovao 100 isan-taona
Hanamarinana izany, manitatra ny ambahindahiny amin’ny seha-pihariana hatrany ity mpandraharaha voalohany amin’ny lafiny fifandraisan-davitra eto Madagasikara ity. Amin’ny ankapobeny, mandray mpiasa vaovao manodidina ny 100 isan-taona ny Telma. Mampiavaka azy ny fandraisana ny mpianatra vao nahavita fianarana vao hiditra amin’ny sehatry ny asa, fa tsy voatery efa nanana traikefa an-taony maro. Vonona hanoro hevitra azy ireo ny sampana mitantana ny mpiasa (DRH) ao amin’ny Telma, hanazava ny tsirairay ny fivoaran’ny asa azo atao ao amin’ny orinasa.
Mandritra ity hetsika Salon de l’étudiant atao eny Ankatso ity, hita eny amin’ny tranohevan’ny Telma ny vokatra sy ny tolotra samihafa rehetra amin’ny lafiny finday sy ny internet. Misy rahateo ny tolotra manokana amin’izao fotoana fidiran’ny mpianatra izao. Anisan’izany ny teknolojia hiaka farany tambajotra matanjaka sady haingana amin’ny alalan’ny Wingle, ny Power Box 4G, ny fibre optique, sns. Misy ny toro-hevitra mazava omen’ny teknisianina mahay ho an’ny mpitsidika tsirairay.